Ngwaahịa Manufacturers | China Ngwaahịa Suppliers, Factory
Hot itinye kpaliri hexagon anya isi kpọchie
Mpụga nke isi nke nkedo nke oghere hexagon isi bolt dị okirikiri, na etiti ya bụ hexagonal, ebe hexagonal bolt bụ nke nwere isi ịghasa isi nwere akụkụ hexagonal. Mgbe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, a na-enweta mmetụta mgbochi corrosion.
Ngwongwo nchara ígwè bụ ụdị ihe eji eme ihe dị elu na otu ụdị ọkọlọtọ. A na-ejikarị ihe eji eme ihe eji arụ ọrụ ígwè iji jikọta njikọ njikọ nke efere ígwè. Nnukwu ihe nkedo dị elu nke hexagonal dị elu nke klas ndị dị elu. Isi hexagonal ga-ebu ibu. Nnukwu ihe owuwu ihe nkuku isii nwere ihe mgbokwasị, akị na efere abụọ. Ohaneze 10.9.
Hot kpaliri Mpụga hegzagon kpọchie
Enwere aha dị iche iche dị iche iche maka mpụga hexagonal mpụta, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkpọ ya bolt hexagonal mpụta, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkpọ ya bolt hexagonal. A pụkwara ịkpọ ya bolt elu nke hexagonal. Ihe a niile pụtara otu ihe. Ọ bụ naanị na àgwà onwe onye dị iche.
Ngwongwo ígwè kwesịrị ekwesị maka mgbidi ụlọ na mgbidi nke usoro nhazi ígwè. Straightening n'ozuzu na-ezo aka nchara nchara nke jikọtara nchara nchara, ya bụ nchara nchara, iji mee ka nkwụsi ike nke purlins ma mee ka purlins ghara ịdị na-adighi ike na mmebi n'okpuru ụfọdụ ikike ndị ọzọ. Enwere nkwado (dịka ogo iri anọ na ise na-agbatị na eriri) yana ihe nkwado zuru oke (yabụ ihe niile kwụ ọtọ). Mgbe ọgwụgwọ gas na-ekpo ọkụ, a na-enweta mmetụta antirust.
Igwe anaghị agba nchara hex mkpụrụ eji na njikọ na bolts na kposara jikọọ na eriri akụkụ. N'ime ha, ụdị nke isii nwere mkpụrụ bụ nke a kacha eji. A na-eji mkpụrụ osisi Grade eme ihe na igwe, akụrụngwa ma ọ bụ ihe owuwu nwere oke ike yana nkenke chọrọ.
Ọdụ nke ntu ntu a na-adọkpụ na-abụkarị n'ụdị ọdụ ọdụ ma ọ bụ ọdụ dị nkọ, nke na-eburu ahịa ngwa ngwa n'ihi iji ya dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe. The malite ịgba ọdụ ntu nwere ike iji maka mkpọpu ala oghere dị iche iche bụ isi ihe na-aghọta ngwa splicing na nzukọ, nwere ike nyagide ike, adịghị mfe atọghe na-adapụ, dị nnọọ mfe ma adaba iji, na nwere nnukwu nchekwa ihe.
A na-adaba na nut na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ya bụ, a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ dị elu. N'ihi na a na-eji zinc kpoo galvanizing na-ekpo ọkụ, ịghagharị dị mkpa. A na-eji ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-eguzogide corrosion siri ike. A na-ejikarị ya eme ihe n’èzí ma nwee akara ngosi 4.8, 8.8, 10.9 na 12.9 dị elu.
U-yiri hoop. Mkpụrụ osisi a na-ejikarị arụ ọrụ na ọkpọkọ ọkpọ iji dozie ọkpọkọ. Nke a bolt dị ka U-udi. Ejikọtara ya femụwe abụọ. Enwere akara 4.8 na 6.8, nke ejiri galvanizing mesoo site na iji nweta mmetụta mmebi ahụ.
U-bolt dị ike, nke a makwaara dị ka nnukwu ike U-kaadị. Mkpụrụ osisi a na-ejikarị arụ ọrụ na ọkpọkọ ọkpọ iji dozie ọkpọkọ. Nke a bolt dị ka U-udi. Ejikọtara ya femụwe abụọ. Enwere akara 4.8, 8.8, 10.9 na 12.9. N'ikwu okwu n'ozuzu, ike dị elu dị elu karịa ọkwa 8.8, nke e ji ike siri ike na ike na-adọta ike. Black agba, ezigbo ebe.
U-bolt, makwaara dị ka u-kaadị. Mkpụrụ osisi a na-ejikarị arụ ọrụ na ọkpọkọ ọkpọ iji dozie ọkpọkọ. Nke a bolt dị ka U-udi. Ejikọtara ya femụwe abụọ. Enwere akara 4.8, 8.8 ọkwa, 10.9 ọkwa na 12.9 ọkwa. Ngwunye ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ U-bolt mgbe ọkụ ọkụ kpaliri ọgwụgwọ elu, si otú a na-enweta mmetụta mgbochi mmebi.